Coronavirus wuu soo kordhayaa Maalin walba Bulshaduna talooyinka Caafimaad si dhab ah uma qaataan "Sideebuu Xaalku Noqon Doonaa"? - Awdinle Online
Coronavirus wuu soo kordhayaa Maalin walba Bulshaduna talooyinka Caafimaad si dhab ah uma qaataan “Sideebuu Xaalku Noqon Doonaa”?
– Madaama awood dawladeed ee wax ka qaban karta cudurkaan ay meeshi oolin
– Madaama uusan jirin Isbitaalo leh ICU unit leh, ama oxygen ku filan iyo Ventilators, Somaalida waxay tiraahda nin tuur leh tabtu u seexdo isaga yaqaan.
Haddaba xaqiiqda dhabta ah maxay tahay?
1) Marka hore waa in maskaxda gashana in COVID19 oo si joogi doono ilaa talaal laga helo (fad ama ha fadin) , taasoo qaadan karta 2 – 3 sanno. Taa micneheedu waxay tahay, waa inaanu barana sida Coronavirus aan ula noolaan lahayn.
2) Dadka Somaalida waa in ay gartaan COVID 19 inuu cadaw yahay. Cadawna waa la iska celiya ee lala dagaalama
ee ma aha in laga baqo ama la isu dhiibo.
3) La dagaalanka COVID 19 waxaa ugu horeeya u hogaansanaanta awaamiirta Hay’adda Caafimaadka ee Caalamka (WHO). Haddii aan loo hogaansamin waa in lagu tala gala Somalia Inay ka dhiman karto laba million iyo ka badan (taasoo ka timid in 20% COVID 19 cases ay noqonayaan SEVERE, Somaaliyana waxba looga qaban karo). Sidaas darteeda qof kasta waa Inu isaga is badbaadiya si dadka kale u badbaadiyo.
4) Cudurkaan meelaha u ku faafo waa goobaha la iskugu yimaado, sida xafladaha, aroosyada, kulamada bulshada, garoonada isboortiga , goobaha cibaadada, iwm.
5) Diinta Islaamka waxay dadka barta shruuc. Tusaale Salaada iyo Soonkaba diinta waxay u sameeysey shruuco ay ku waajibaan. Sidoo kale la dagaalanka cudurada, taxadirka iyo nadaafada waxay u yihiin shruucda looga hortago, marka u hogaansanaantooda waa waajib dawladu mas’uuliyad ka saarantahay in ay shacbiga ku hogaamiso.
Talaabooyinkaan waa in la xoojiya:
a) Waa in la si adkeeya wacyi gelinta. dadka waa in xaafadaha looga taga oo loo sheega in ay fiicantahay in ay guriyahooda joogaan. Kan joogi karin waa inuu iska ilaaliya isku dhowaanshaha dadka.
b) Waa in looga taga goobaha ganacsiga, loona sheega in ay face maska xirtaan.
c) Dadka xarqaanada leh waa in loo sheega in ay face maska toolaan iyagoo adeegsanaya Material fiican
d) Culumada waa in lala hadla si ay dadweynaha ugu qanciyaan inay guriyahooda ku tukadaan
e) Bajaajleyda iyo qofka saaran waa in ay face maska xirtaan. Baabuurtana sidoo kale
f) Basaska waa in laga joojiya in ay shaqeeyaan
g) qof kasta oo Somali ah waa inuu qaata face maska.
h) Dadka marka ay wax iibsanayaan waa in ay kala fogaadaan
i) Isku socodka gobolada iyo degmooyinka Dalka waa in la joojiya. Baabuurta xamuulka sidda oo keliya loo ogolaada.
j) La dagaalanka COVID 19 waa mas’uuliyad wadareed (Collective Responsibility), sidaas darteed qof kasta waa inuu mas’uul iska saara.
k) Qofka og inuu cudurka ku dhacey ama calaamooyinkiisa ka muuqdaan, haddana bulshada la soo dhexgala waa mas’uuliyad xumo. Wa bilaahi tawfiiq
Qore: Prof. Dr. Ali Said Faqi
Previous articleGudoomiyaha cusub ee golaha shacabka KGS oo si rasmi ah xilka ula wareegay.
Next articleMaamulka G/Banaadir & Gaadiidleyda Muqdisho oo Go’aano soo saaray